Indlwana ecebisayo kumbono wechibi laseSibillini
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguClelia
Lo mhlaba unezindlu ezi-2 ezinefenitshala entle, ngaphakathi kwepropathi enesango enye enabela iihektare ezi-2. Ibekwe kwindawo ephakamileyo ye-800 yeemitha kunye nepanorama emangalisayo yeentaba ze-Sibillini kunye neLake Gerosa apho i-10' ukusuka kuyo. I-cottage ijikelezwe yihlathi elikhulu lepine kunye ne-yaches, i-sunbeds, imidlalo yabantwana. I-Barbecue kunye ne-lake view gazebo iya kukuvumela ukuba wonwabe ngalo lonke ixesha lokuqhayisa kwakho. Ilungele iintsapho ezinabantwana okanye iqela labahlobo.
I-cottage ijikelezwe yi-greenery kwaye ibonakaliswe ngokuhlaziywa ngokuhlonipha izinto zakudala ... Iibhedi zentsimbi ezenziweyo, iiplanga zokhuni, uphahla lwamaplanga, ifenitshala ye-antique kwaye ikunika ithuba lokuphumla kwi-hammock okanye i-sunbed ngokusondeleyo kwindalo. ukuncoma ichibi kunye netyathanga leeNtaba zeSibillini.Ngaphandle ungasoloko ungcamla inyama eyojiweyo kwibarbecue ngelixa abantwana besonwaba ngokukhuselekileyo kwipaki enkulu yendlwana.
Amafulethi abekwe kumgangatho wokuqala.
I-Apartment 1 (iibhedi ezi-4) inegumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela eligcwele ishawa kunye neenwele ezomileyo, igumbi lokuhlala- ikhitshi elinesofa-ibhedi ephindwe kabini kunye nekhabhathi, igumbi lokuhlambela lesibini elineshawa kunye negumbi lokuhlambela. Ikhitshi ligcwele isitya ngasinye, ifriji yesikhenkcisi, umatshini wokuhlamba owakhelwe ngaphakathi, iTV, iayini kunye netafile yoku-ayina.
I-30 sqm terrace ixhotyiswe ngesambrela, itafile kunye nezitulo zokutya ngaphandle.
Indlu yesibini (2 nd 2 iibhedi) iqulathe igumbi kabini kunye 2 iibhedi Puff ukuba, ukuba kuyimfuneko, ibe 2 iibhedi single, lokuhlambela kunye lokuhlambela, epheleleyo neshawa kunye neenwele ezomileyo. Hlala- ikhitshi ligcwele isitya ngasinye, ifriji yefriji, umatshini wokuhlamba owakhelwe ngaphakathi, umabonakude, iayini kunye netafile yoku-ayina.
Kumgangatho ophantsi, indlu yasefama inegumbi lokuhlala elinekhitshi kunye neziko kunye negumbi elinefenitshala yexesha
Uphawu lwale ndawo luyimfihlo kunye noxolo olupheleleyo
Umbuki zindwendwe ngu- Clelia
Uya kuba nokuzimela ngokupheleleyo kodwa ukuba kuyimfuneko umnini uya kuba negunya lakho ngokupheleleyo